Posted by ညမီးအိမ် at 11:23:00 PM
မီးအိမ်လေး အမကတော့ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အချိန်တုန်းက ဘုရားသခင်က ပွေ့ချီဖို့ မေ့နေတယ်ထင်တယ်၊ ဒုက္ခ မီးကျီးခဲတွေ ပေါ်ကို ကိုယ်ဘာသာ ဖြတ်လျှောက်နေတာ ခုချိန်ထိလို့ ထင်ပါတယ်
မြန်မာမှာ ကံကံ၏ အကျိုးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲအခက်အခဲတွေ တွေ. တွေ. တချိန်က ကိုယ် သူများကိုကူညီ ဖူးခဲ. ရင် ကိုယ်လည်းတူသောအကျိုး ကိုခံစားရမှာပါ။တချိန်လုံး အဲဒီ အကျိုးကို မျှော်လင်.နေ၇င်လည်းဘာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီတော.ကြုံလာတဲ. အခက်အခဲကိုခေါင်းအေးအေး ထားပြီး ရင်ဆိုင်လိုက်တာ ကောင်းဆုံးပဲ။ "မုန်တိုင်းထန်ပြီးရင် လေပြည်လေညှင်းလေးတွေ အလှည်.ရောက်လာ ပါလိမ်.မယ် "
Monday, July 20, 2009 7:59:00 AM
Tuesday, July 21, 2009 10:25:00 PM
Monday, August 31, 2009 2:22:00 PM
ဟုတ်တယ်ဗျ ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တယ် အဲဒီစာအုပ်ကို သူများငှားထားတုန်း နည်းနည်းပဲ ဖတ်ရသေးတယ် ထပ်ငှားမလို့ လုပ်တော့ စာအုပ်ဆိုင်က အဲဒီစာအုပ် ပျောက်သွားလို့တဲ့ဗျ :(
Friday, October 16, 2009 6:00:00 PM